I-China Wool Dryer Ball ifektri kanye nabakhiqizi | Huasheng
Indwangu:I-100% yeWebaland Wool entsha, noma inkambiso
Isisindo sebhola: I-12g, 15g, 20g, 42g, 55g, 85g, 100g
Umbala: Yenza uku-oda
Iphakheji: Izikhwama zezindwangu 6 pack, noma zenziwe uku-oda
I-logo: yenziwe uku-oda
Amabhola owomile woboya ahlala enziwe ngo-100% wohlobo waseNew Zealand. Ngeke zembule futhi ziyohlala iminyaka. Ubungako bawo busezingeni eliphezulu ngokusebenza kahle kokomisa okuphezulu. Zinhle ngokushisa izinto zezimpaphe phansi ezinjengojolo kanye namajakhethi. Ngokusebenzisa amabhola owomisa uboya kusindisa isikhumba sakho emakhemikhali asetshenziswa emashidini owomile kanye nezithako zokuthambisa izindwangu, futhi futhi kusindisa ukomisa kwakho kokusalela okusele kulokhu. Kuyindlela ehlukile kwezomnotho kumashidi akade amise amakhemikhali futhi anobuthi kanye nabathambisa izindwangu. Kunconyelwa ngokukhethekile ama-diapers wezingane nezingubo, kanye nabantu abanesikhumba esithambile.
* Zama ukushaya ngamakha amabhola owomisa ngokufaka amaconsi ambalwa kawoyela obalulekile (i-lavender, ulamula, njll) ebhola ngalinye. Lokhu kuzokwenza kancane iphunga lakho lokugqoka!
* Yehlisa i-static ngokuqhubekayo ngokuqinisekisa ukuthi izambatho azomisiwe ngaphezulu. Zama ukukhipha izingubo ngokushesha kunokuba uvame ukwenza.
* I-3 pack yeWool Dryer Balls yomthwalo omncane.
* I-6 pack yamabhola eWool Dryer omthwalo omkhulu.
Kungani Khetha amabhola Ethu owomile?
Khipha Laundry Eqinile futhi Ethambile: Isiza ukunciphisa ukubambelela okuqinile ngokunciphisa ukuxhumana phakathi kwezingubo. Izingubo zizothambisa ngokwemvelo futhi imibimbi ivinjelwe ngempumelelo ngenxa yokuncipha kokushayisana.
Nakekela Izindwangu Nezikhumba Zakho: Izinto eziphilayo, i-eco-laundry, i-hypoallergenic, azikho izithasiselo zamakhemikhali noma eziyingozi. Ilungele isikhumba esizwelayo, amathawula, abaduduzi, okokugqoka, okokugeza izingane, okwezindwangu nezingubo zezilwane ezifuywayo njll. Gcina isikhathi Sakho Namandla: Amabhola oboya obamba okwenyusa ayawa lapho ezomisa, enze ukuthi ijazi lome ngokushesha, likhiphe amanzi amaningi wezingubo zakho.Nciphisa isikhathi sakho somisa ngo-20% -45%.
Ukukhetha kwe-Eco-Friendly: Ngokungafani namashidi owomisa adinga ukulahlwa njalo ngemuva kokusetshenziswa, amabhola ethu wokuthambisa anobuhlakani okusiza usize ukonga imali, unciphise imfucuza futhi ugcine izingubo zakho zithandeka kunangaphambili.
1. Ukusondelana Manual, kungasetshenziswa kaninginingi
2. Ukomiswa okusheshayo, ukonga amandla
3. Yehlisa ugesi osendaweni
4. Uboya bemvelo, akunamakhemikhali
1. Sebenzisa amabhola ama-3-4 umthwalo omncane / ophakathi namabhola angama-5-6 umthwalo omkhulu.
2. Ukuze uzisebenzise, ​​mane uzibeke endaweni eyomile bese uyishiya lapho. Elula!
3. Ungangeza iphunga elondolo lakho ngokufaka amaconsi ambalwa kawoyela obalulekile ebholeni ngalinye.
4. Asikho isidingo sokuhlanza amabhola akho owomisa uboya ngoba asendaweni eyomile kuphela ngezingubo ezihlanzekile
5. Kodwa-ke uma zidinga ukuhlanzwa, gcina indawo ku-washer lapho ifudumele futhi yomile endaweni eyomile.
Esedlule: Isikhwama sezinzwa
Olandelayo: Kucindezelwe uWool Felt